Uwe mkpuchi akwa wear uwe ọrụ • ihe eji arụ ọrụ kọmputa P&M
Aprons n'ihi na ọrụ bụ ngwaahịa ahaziri maka ọrụ dị iche iche ọrụ. A na-eji ya echebe uwe megide unyi ma ọ bụ mmerụ ahụ. Ogo ha zuru oke, ma enwere ike idozi ya na eriri.
Na mgbakwunye na ngwaahịa ndị a na-emegharị emegharị, anyị nwekwara akwa mkpuchi nwere ike ịnwe na 10 ma ọ bụ 100 iberibe, ọkachasị eji gastronomy N'ime ụlọ ahịa ahụ, ị ​​ga-ahụ ụdị eji ụdị ihe dị iche iche dị ka owu dị arọ, polyester, roba, polypropylene na ndị ọzọ, dabere na ebe a na-aga.
Ihe eji eme bu nke di nma ma nwekwaa ihe ndi ozo na ndi okacha amara. Ejiri ihe eji eme ngwa ngwa mejuputara otutu ya. Anyị na-enye, n'etiti ndị ọzọ, ihe ịchọ mma, nri na ebe a na-egbu anụ.
Anyị na-enyekwa pịrị apọn na ngalaba nke uwe ọrụ na akwa mkpuchi ụmụ maka ndị na-eto eto hụrụ n'anya maka nri nri.
Onyinye ọrụ apron gụnyere:
maka gastronomy na SPA,
mee polypropylene / Pee / ịkwanyere / Tyvek,
Gastronomy na SPA
Ihe kachasị ewu ewu bụ onyinye nchebe raara nye ụlọ ọrụ isi nri na ihe ịchọ mma. Anyi n’enyekwa ubochi a na - akpọ - apron. Uwe ndị ahụ bụ nke owu na ngwakọta nke owu na ihe ndị sịntetik, na-enye ohere iji wepu nsị site na nri ma ọ bụ ihe ịchọ mma, n'etiti ndị ọzọ. Acha agba nke akwa eji eji akwa mkpuchi tinye ihe dị mma.
N'ime ụlọ ọrụ ndị a, ọmarịcha mma na onyonyo dị ezigbo mkpa n'ihi na ndị ọrụ nwere ọtụtụ kọntaktị na ndị ahịa - ngwaahịa anyị ga-eme ka ha nwee mmetụta nke ọkachamara na ịmara. Nhọrọ ọzọ Ihe mkpuchi logo ahụ ga - enyere gị aka ịpụ na asọmpi ahụ wee jidesie ebe nchekwa nke onye nnata ike.
Pụrụ iche mgbochi-ebi ngwaọrụ
Uwe igwe akwa di elu mgbochi ịkpụ ezubere maka ụlọ ọrụ nri. Ha bụ akụkụ nke akụrụngwa nke onye ọrụ na-arụ ọrụ metụtara ijikwa mma eduzi n'akụkụ ahụ. A na-eji akwa igwe anaghị edozi akwa akwa yana usoro mgbanaka igwe nwere dayameta nke 7 mm, na-egbo mkpa nke EN13998 (ọkwa 2). Ọkọlọtọ ahụ na-enye ohere iji ọnọdụ nke nlekọta pụrụ iche. Nnukwu nguzogide nke ihe a na-eme ka ọ ghara ikwe omume ịkụ ahụ.
Aprons dị mma maka ịrụ ọrụ na usoro HACCP. Enwere ike iji ha na nhazi plastik na akpụkpọ anụ, yana nkewa anụ na ọkpụkpụ. Onye rụpụtara hụ na apron, n'agbanyeghị ya, dị ka o kwere mee ma gbochighị nnwere onwe ịgagharị.
Polypropylene / Pee / ịkwanyere / TYVEK
Uwe apron mere polypropylene, Pee, ịkwanyere na tyvek ezubere maka ọnọdụ ebe enwere ihe nwere ike imebi uwe na akpụkpọ anụ n'ihi nsonye na ihe ndị dị ka kemịkal ma ọ bụ ihe ọkụ ọkụ. Anyị na-enye ihe mkpuchi ụlọ nyocha nke polypropylene nwere olu akwa iji kpuchido olu, yana ụdị eji microporous PE laminate emere maka nchekwa mgbe ị na-arụ ọrụ na ihe ndị na-emerụ ahụ.
N'ime akwa mkpuchi, enwere akwa mkpuchi PVC, nke kachasị mma maka ịrụ ọrụ na ebe a na-egbu anụ iji hazie anụ na-achọghị mma na-atụ aka na ahụ. Mkpokọta nke na-echebe uwe ndị ahụ na-ahụ maka ya site na ngwakọta.
Uwe mkpuchi ọrụ
Anyị na-enye apron na-arụ ọrụ ezigbo ụlọ ọrụ Leber & Hollman na Reis. Dị anyị nwere ire ere dị na uwe ogologo na mkpụmkpụ. A na-atụ aro akwa mkpuchi nke ngwakọta polyester na akwa dị arọ maka ịrụ ọrụ na kichin, ebe uwe na-ekpughere ya na unyi na-agakarị, nke n'aka nke a na-achọkarị ịsa ahụ na oke okpomọkụ, ọbụlagodi 95 Celsius, ka ị na-echekwa ọmarịcha uwe ahụ.
Na mgbakwunye na kichin, akwa mkpuchi zuru oke maka ịrụ ọrụ n'ụlọ nkwakọba ihe, na mmepụta, mgbakọ ma ọ bụ na ụlọ nyocha. Nhazi oge a na-enye ohere maka ọdịdị na-adọrọ adọrọ, na nkọwa zuru oke ga-eji ogologo oge.
allegro na-arụ ọrụ apronsọcha ọrụndi nwanyi n’oru oruarụ ọrụọrụ Allegroihe eji eme akwandi nwanyi n’oru oruonyinye ndi nwanyi Allegroọrụ maka ndị na-ehicha iheọrụ aprons maciejụmụ nwoke arụ ọrụọrụ apịachị maka ụmụ nwoke allegrondị na-arụ ọrụ apronsụdị nke eji arụ ọrụna-arụ ọrụ apịuwe akwa ndi nwanyi